egqamile kakhulu futhi enhle igama yamaGreki asendulo Taisiya lihunyushwe ngokuthi "zihlakaniphile," "evundile ngokuthi", "sekwephuzile", "okuqondene unkulunkulukazi u-Isis." Igama usuku Taisia amaKristu obu-Orthodox ukugubha izikhathi eziningana ngonyaka, ngoba wamzalela igama hhayi omunye saint. Kulezi bathathu kuphela abantu okwaziwa: Taisija Martyress, Taisija waseGibhithe (V c) futhi i-Nun Taisija waseGibhithe Thebaid (VI c). Ukutadisha lapho Taisia igubha lokuzalwa, kufanele ucabangele ngokucophelela umlando abangcwele. Phela, kuyinto nokholo eNkosini uJesu Kristu futhi saphenduka ngobuqotho ezonweni zabo amsindise amalangabi esihogo.
Taisiya: Orthodox igama ngosuku
Mayelana Thais Martyr abanolwazi oluncane kakhulu, kuphela ukuthi wayethwele ukholo so- kuvuma ngokugqamile neliqinile kukaKristu ukholo. Igama usuku Taisia Martyr lugujwa ngomhla ka-Ephreli 4 ekhalendeni yesimanje.
Kodwa ukuphila Saint Taisia iGibhithe ngokuningiliziwe ezaziwayo. Wayehlala ekhulwini V e Ancient Egypt. Lapho abazali bakhe abacebile wafa, waqala ukuphila ukuphila zenzisa futhi ezinikezela esiza abantulayo nosizo ekunakekeleni abagulayo nababuthaka.
Indlu yakhe ngokuvamile kakhulu wayeka izindela, owayevela ezingwadule aya emizini ukuthengisa nobhasikidi babo. Taisiya wayemthanda futhi ohlonishwayo, abantu babemhlonipha kakhulu kubantu. Kodwa ngemva yawo wonke umsebenzi onzima kwesimiso yayo yesihle zezimali kancane kancane sancipha. Futhi lamfica isidingo. Ngalesi sikhathi, kunabantu sizungezwe Taisia okungafanele, ize iqale ukufana ukuphila okumatasa.
Uma aphume ehlane weza sezindela izindela, abake bahlala lapho Thais. Ukubona yakhe ibe lusizi futhi yesono, lusizi kakhulu, ngoba ngaso sonke isikhathi wabanika othandweni lwami. Mema Abha yakhe, ogama lakhe lalingu-ioann Kolov, bamcela ukusiza Thais. Wasuka lapho waya wahlala eceleni kwakhe, bebambe amehlo lakhe, wakhala. Wakhathazeka futhi ngambuza ukuthi wayememeza. Waphendula ngokuthi wabona uSathane udlala ngobuso bakhe, futhi sibangalasile kalusizi ngalokho uJesu akakuthandanga wakhe, kungani ayenze neNkosi ezimbi. Yena benamandla enjalo amazwi accusatory futhi ezazinyakaziswa mayelana nokuthi kukhona ukuphenduka kwakhe. Lo mdala wathi yena, wayiphoqa ukuba ahambe naye. Abha John kakhulu bamangale kakhulu ukuthi Taisia ngaphandle kokulibala wangena izinyembezi kuye. Akazange ngithi goodbye kuya ubani, futhi akazange ngisho ukunikeza noma yimuphi imiyalelo mayelana nempahla yabo.
A ukufa obunokuthula
Lapho efika ehlane, ukuthi yayingekho enye indlela kodwa yokulala ogwadule. Ukwenza ikhanda lakhe aphume isihlabathi, christened phambi wabeka wakhe embhedeni, futhi yena kude kuwo walala, wakhuleka phambi kwalo. Ekuseni, lapho evuka, wathola Taisiya efile. Wayengumuntu wethukile kakhulu kangangokuba wafa, futhi ayizange waphenduka futhi azisetshenziswa ngokuba indelakazi hhayi, njengoba angathanda.
Ngokungazelelwe, wamemeza ezwa izwi likaNkulunkulu, owathi ihora kwakhe ukuphenduka kwakubaluleke ngaphezu ukuphenduka eside kunabanye akunjalo ngokungenabugovu ukukwenza. Ngakho lapha kuyinto emangalisayo uJehova uJohane waphendula yombuzo wakhe ngalokho ukuthethelelwa kwezono Taisia owayethatha ubuqotho bakhe nokuzinikela ekuphendukeni.
Manje-Orthodox futhi amdumise lokuzalwa. Taisiya ekhalendeni isonto igubha usuku mhla zingama-23 Meyi. Kodwa akugcini lapho. Empeleni, kwaba khona omunye saint, esinegama, futhi kwezinye izici isiphetho sabo ayefana ncamashi.
Taisiya waseGibhithe Thebaid
Ukuthola ukuba umbuzo lapho omunye yosuku lokuzalwa Taisiya, kumele ukhumbule nakanjani futhi omunye saint ngaphezulu - Taisia waseGibhithe Thebaid. Ekuphileni kulotshiwe ukuthi ubeyisibenzi indodakazi isifebe, okuyinto ayemfundisa izikebhe zabo. Taisiya ezahlukene yinhle kakhulu ngendlela engavamile, ngakho yamakhasimende akhe abayizigebengu babezimisele ukukhokha imali eningi, ngenxa okuyinto wahlupheka incithakalo yangempela. Omunye wafika Pafnutiy wakhe kamfundisi Veliky, owayefuna ukuba sikhulume naye. Ngemva ingxoxo yabo, Taisiya wabutha wonke amagugu azo wathola lushiswe skwele edolobheni. Khona-ke waya esigodlweni Saint Paphnutios. Lapho, bavalelwe esitokisini, ekhalela njalo izono zabo, wachitha iminyaka emithathu njengesibonakaliso unkom 'idlayodwa, ukudla kanye kuphela ngosuku.
Lapho iminyaka emithathu sele idlulile, le Paphnutius engcwele laba Anthony Elikhulu, ukubuza ukuthi iNkosi wamthethelela Taisiya. Khona-ke u-Antony wakhipha umyalo wokuba zonke izindela bakhe ukuba bathandazele lo uqobo lwakhe ubaniké impendulo. Ngokusebenzisa isikhathi Simple uPawulu waba nombono indlela ezintathu sasekhaya wobuhle okungavamile Awuvikela embhedeni wasezulwini. UPawulu wajabula, licabanga ukuthi umbhede ohloselwe uyise u-Anthony, kodwa izwi livela ezulwini wamemezela ukuthi nguye ngoba Thais isifebe. Ngakho, Paphnutius, ukufunda intando kaNkulunkulu, waya Thais kuseli ukuletha bese anothi: 'INkosi esezithethelele izono zakhe. Ngemva kwamasonto amabili, wokheleka lesi sifo, futhi ngemva kwezinsuku ezintathu ihambe ngokuthula eNkosini ongcwele Taisiya. Igama usuku ke manje kugujwa 21 Okthoba.
Thais ngokuphenduka ezijulile etholakele isihe nentethelelo lweNkosi. Ngakho, igama Taisia kugujwa kathathu ngonyaka, njengoba kushiwo ngenhla: 4 Apreli, 23 Meyi kanye 21 Okthoba.
UbuKristu Modern. Ukuthandazela impilo yezingane
Isithonjana "uNina kaNkulunkulu eJerusalema": umlando isithombe nencazelo yalo
Indlela kubuyiswe uthando othandana naye?
Abafundi bancishisiwe: yikuphi okuxhunyiwe?